Minisitry ny fahasalamam-bahoaka Tsy ampitenenana sa tsy mety hiteny ?
Fitsaboana nentim-paharazana Efa mahenika faritra maro ny FI.TRA.MA
Efa tena resy lahatra tanteraka amin’ny fitsaboan-tena amin’ny alalan’ny natoraly ny ankamaroan’ny Malagasy.
Krizy ara-pahasalamana Nandroso drafi-panarenana roa ny Praiminisitra
Mivonona hamoaka drafi-panarenana amin` ny krizy ara-pahasalamana, izay efa nanomboka roa volana lasa izay, ny governemanta Malagasy.
Dr Ratsimivony Jean Claude « Mila fitandremana ny fahasalamana rehefa ririnina »
Tafiditra tanteraka ao anatin’ny vanim-potoanan’ny ririnina isika ankehitriny, fotoana izay mampirongatra ireo karazan’aretina maro samihafa amin’ny andavanandro.
Betroka Niakatra 100 ireo matin'ny tazomoka
Miakatra miakatra hatrany ny isan'ny olona matin'ny tazomoka izay aretiny teny mamely mafy tokoa any amin'ny distrikan'i Betroka Faritra Anosy ankehitriny raha ny nambaran'ny depiote Nicolas Randrianasolo voafidy tany amin'ity toerana ity
Fadimbolana Mety hahafaty raha tratry ny mpisompatra
Rehefa tratry ny jijaka ny vehivavy dia tsy mijanona intsony ny fadimbolany,
Fitsaboana tradisionela Malagasy Be mpitady any amin’ny Faritra
Ankoatra ny fitsaboana ny mpiray tanindrazana amin’ny alalan’ireo karazana zava-maniry haodina hanjary ho fanafody mahasitrana sy ny otra dia manome asa ireo tanora tsy an’asa eto amintsika ihany koa ny FITRAMA na ny Fitsaboana Tradisionela Malagasy.
CHU Morafeno Toamasina Nodimandry ilay mpitsabo voan’ny Covid-19
Olona roa no namoy ny ainy tao amin’ny Hopitaly manarapenitra, fitsaboana ireo mararin’ny Coronavirus omaly.
xmpanao gazety na koa mandray anjara amin` ireo adihevitra amin` ireo haino aman-jery. Eto amintsika toa tsy hita sehatra loatra ny Praiminisitra indrindra moa ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, Ahmad Ahmad. Ity farany anefa dia tsy fantatra hoe lasa aiza amin` izao. Tsy lavina fa miasa andro aman'alina izy. Heverina ihany koa fa lamina mety napetraky ny Filoham-pirenena ka inona koa no mety ho tenenin' ny ministra rehefa avy niteny ny filohan`ny Repoblika? Midika ve izany fa tsy ampitenenina ity tompon'andraikitra voalohany amin`ny fahasalamana ity? Marihana fa ny minisitra Ahmad Ahmad dia mpitsabo ka raha ny zava-misy amin` izao, izay tena mifamahofaho eo amin` ny resaka fanafody Covid Organics, dia zarany aza no ho tsy ampiteneniny. Mety tsy te hidi-kizo amin` io mihitsy ve izy? Saingy aiza ho aiza ny “serment d'Hippocrate” amin` ny hoe “tsy maintsy mitsabo ny marary isika amin'izay eo am-pela-tànana”? Na dia misy aza ireo no lazaina fandresena dia amin` ny maha tomponandraikitra voalohany azy no tokony hizarany ireo izay ho mety “effets secondaires” amin` izay fanafody ampiasaina entina iadiana amin`ny COVID-19. Anjarany no mampitony ny vahoaka Malagasy. Amin` ny vanim-potoan' ny fahamehana ara-pahasalamana toy izao sehetra telo no tsy azo hamaivanina: politika, fahasalamana ary sosialy.